Airbus sy Air France dia mikendry ny sidina mahomby indrindra amin'ny angovo
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Airbus sy Air France dia mikendry ny sidina mahomby indrindra amin'ny angovo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
ALBATROSS dia mikendry ny hampiseho amin'ny alàlan'ny andiana sidina mivantana amin'ny vavahady mivantana eraky ny Eropa, ny fahafaha-mampihatra sidina mahomby indrindra amin'ny fotoana fohy, amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo fanavaozana ara-teknika sy ara-teknika R&D.
Nalefa tamin'ny Febroary 2021, ALBATROSS dia tetik'asa lehibe ananan'ireo vondrona mpandray anjara lehibe amin'ny fiaramanidina eropeana tarihin'i Airbus.
ALBATROSS dia manaraka fomba fanao amin'ny fomba feno amin'ny alàlan'ny fandrakofana ireo dingana rehetra amin'ny sidina, mahatafiditra mivantana ireo vondrona mpandray anjara rehetra mifandraika amin'izany.
Manomboka amin'ny volana septambra 2021, ny fitsapana mivantana dia misy sidina fampisehoana manodidina ny 1,000, mampiseho ny vahaolana matotra miasa miaraka amin'ny solika mety sy tahiry fandefasana emission CO2.
Airbus, Air France ary ny DSNA, ny French Air Navigation Service Provider (ANSP), dia nanomboka niasa tamin'ny famolavolana ny "sidina mahomby indrindra amin'ny angovo", taorian'ny sidina fampisehoana voalohany nataony avy any Paris mankany Toulouse Blagnac tamin'ny andron'ny hetsika Airbus Summit. Ny fiaramanidina dia nanidina làlana namboarina, nanamarika ny voalohany tamin'ireo andiam-pitsapana namboarina nandritra ny 2021 sy 2022 tao anatin'ny tetikasan'ny tetik'asa "ALBATROSS" Joint European Sky Research Joint (SESAR JU).
Nalefa tamin'ny Febroary 2021, ALBATROSS dia tetik'asa lehibe ananan'ireo vondrona mpandray anjara lehibe amin'ny fiaramanidina eropeana tarihin'i Airbus. Izy io dia mikendry ny hampiseho, amin'ny alàlan'ny andiana sidina mivantana amin'ny vavahady mivantana mankany Eropa, ny fahafaha-mampihatra sidina mahomby indrindra amin'ny fotoana fohy, amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo fanavaozana ara-teknika sy ara-teknika R&D.
Ny "ALBATROSS" dia manaraka ny fomba feno amin'ny alàlan'ny fandrakofana ny dingana rehetra amin'ny sidina, mahatafiditra mivantana ireo vondrona mpandray anjara rehetra mifandraika amin'izany (toy ny zotram-piaramanidina, ANSP, mpitantana ny tambajotra, seranam-piaramanidina sy indostria) ary miresaka momba ny lafiny fiasa sy teknolojia amin'ny fiaramanidina sy ny Air Traffic Management (ATM). Vahaolana maro no hampiharina mandritra ny fihetsiketsehana amin'ny sidina, manomboka amin'ny fomba fiasa mazava tsara ka hatrany amin'ny fiakarana sy fidinana hatrany, fitantanana mavitrika kokoa amin'ny famerana ny habakabaka ilaina, taxi-be maharitra ary ny fampiasana solika maharitra (SAF) maharitra.
Noho ny fandefasana ny angon-drakitra efatra-lalana, ny ATM dia afaka manatsara sy maminavina tsara kokoa ny lalan'ny fiaramanidina iray, amin'izay hahafahany mampihena avy hatrany ny fifamoivoizana.
Manomboka amin'ny volana septambra 2021, ireo fitsapana mivantana ireo dia misy sidina fampisehoana manodidina ny 1,000, mampiseho ny vahaolana matotra miasa miaraka amin'ny solika mety sy tahiry fandefasana emission CO2. Ny valiny voalohany dia antenaina ho hita amin'ny 2022.
Ireo mpiara-miasa ALBATROSS dia Airbus, Air France, Austro Control, DLR, DSNA, Eurocontrol, LFV, Lufthansa, Novair, Schiphol, Smart Airport Systems, SWEDAVIA, SWISS, Thales AVS France ary WIZZ AIR UK.
Ny famatsiam-bola ny tetikasa dia natolotry ny EU eo ambanin'ny Fifanarahana Grant No. 101017678.